အမေးများသောမေးခွန်းများအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု FIDULINK Online Firm ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း
WWW.FIDULINK.COM > မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ?
ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီအခြေအနေကိုရေးသားရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသလား။
Fidulink သည်ကမ္ဘာ့ကုမ္မဏီများဖန်တီးမှုကိုအထူးပြုသည့်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဥရောပ၌သာမကကုမ္ပဏီနှင့်တရား ၀ င်ပုံစံ၊ သင်ဖန်တီးလိုသောကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှု
ကျွန်ုပ် Fidulink ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တိုင်ပင်ရန်ရက်ချိန်းယူလို့ရပါသလား။
အမှန်စင်စစ်ဤအဆင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းသို့မဟုတ်ပြproblemနာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသည်။ အမြဲတမ်းပိုမိုထိရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ Live Chat၊ WhatsApp နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ငါ Fidulink နဲ့ငါ့တလျှောက်လုံးတူညီတဲ့အကြံပေးရှိလိမ့်မည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအတွက်ဖောက်သည်ဖိုင်တစ်ခုစီနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အဖြစ်သိကြသောကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖိုင်မန်နေဂျာကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါကအဟောင်းနှင့်အသစ်မန်နေဂျာသည်ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီနှင့်အကောင်အထည်ဖော်သောပြorနာများသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီကိုအပြည့်အဝမွမ်းမံပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအဟောင်း၏ရှေ့မှောက်၌အကြံပေးအသစ် (အင်အားကြီးမားမှုကိစ္စများ မှလွဲ၍ ကျန်) သည်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည် FiduLink ဖြင့်ဥရောပ၌ (သို့) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖန်တီးမှုကဏ္inမှအထူးကျွမ်းကျင်သူ Fidulink သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖန်တီးမှုစီမံကိန်းအားအပြည့်အဝထောက်ခံမှုအပြင်စီးပွားရေးဖန်တီးရှင်အတွက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ထူးခြားသောကိရိယာများကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အချို့သောတရားစီရင်မှုများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖော်မြူလာများကိုဖော်ထုတ်ပြသထားသော်လည်းစီမံကိန်း၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်၎င်း၏ပြissuesနာများအရအထူးပြုလုပ်ထားသောဖော်မြူလာများရှိသည်။ Fidulink ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ၂၄ နာရီမှ ၁၅ ရက်အတွင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်သင့်လုပ်ငန်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအချက်များပေါ် မူတည်၍ ကြာသည်။
ငါကအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပြီးသား, ငါ Fidulink လွှဲပြောင်းယူနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်သလား?
သင်၏တောင်းဆိုမှုနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်အတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းကိုဖြေ ဆို၍ မရပါ။ မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုင်များနှင့်နာမည်ကောင်းမရသည့်ကုမ္ပဏီတခု၏အကူအညီဖြင့်ဖန်တီးထားသောကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်း။ မရပါ။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်အခွန်နှင့်အခြားပံ့ပိုးမှုများပေးဆောင်ခြင်းမရှိသောကုမ္ပဏီများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းယူသည်။
သင်၏စီးပွားရေးကိုလွှဲပြောင်းယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိသိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများစုဆောင်းရန် Fidulink ကိုခေါ်။ ရနိုင်ပါသလား။
အမှန်စင်စစ်ဤအချက်သည် Fidulink သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသောမစ်ရှင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများအပြင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အရည်အချင်းနှင့်အရည်အချင်းတို့ကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုရွေးချယ်ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်တည်ထောင်ချိန်၌သင့်အားတန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုသက်သာစေရန်အပြည့်အဝသော့ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
ငါကန ဦး အင်တာဗျူးနှင့် / သို့မဟုတ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဝန်ထမ်း (မ်ား) အားထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက် Fidulink သို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသလား။
ဤအဖြစ်အပျက်ကာလအတွင်းသင့်အားမှားယွင်းသောလမ်းဖြင့်မရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမစ်ရှင်အမျိုးအစားကိုချမှတ်ထားသည်။ ကဏ္ the ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအကြံပေးများထဲမှထုတ်ပယ်ခြင်းမတိုင်မှီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အင်တာဗျူးတွင်သင့်အားကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ထုတ်ပယ်သို့မဟုတ်အကောင့်အားလုံး၏ချိန်ခွင်လျှာကိုတောင်မှ။ ဤပုံသေနည်းသည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားစီမံခန့်ခွဲမှု၌ပိုမိုငြိမ်သက်အေးချမ်းစေသည်။ သင် ၀ န်ဆောင်မှုမှသင်၏ Fidulink အကြံပေးထံမှတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်ခေါ်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Fidulink တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ၍ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာအတွက်သင်သည်အချက်အလက်များအပြင်သဘောတူညီချက်နှင့်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောပါဝါများကိုလည်းလိုအပ်သည်။ တစ် notarial လုပ်ရပ်အားဖြင့်။ Fidulink မှ၎င်းစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုတောင်းခံပါကသင့်အားသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်စာရွက်စာတမ်းများကိုသတ်မှတ်ပြီးသင့် Fidulink အကြံပေးထံပေးပို့ရန်သင်အနီးအနားရှိ notary သို့သွားပါ။
ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်လုပ်ရပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသောအခါကျွန်ုပ်အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုရန် Fidulink ကိုခေါ်။ ရမလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတန်းကြောင့် Fidulink နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေရန်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသူများအတွက်သင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိရန်အချက်များအပြင်သဘောတူညီချက်နှင့်ပါ ၀ င်မှုဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်စွမ်းအားတစ်ခုပေးရလိမ့်မည်။ notarial ။ Fidulink မှ၎င်းစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုတောင်းခံပါကသင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုအတည်ပြုပြီးသင်၏ Fidulink အကြံပေးထံပေးပို့ရန်အတွက်သင်အနီးအနားရှိ notary သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
ဖောက်သည်အကောင့်တစ်ခုကို www.fidulink.com တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
သင်သည်ဤ link ကိုမှာယူသောအခါသို့မဟုတ်လိုက်နာပါကသင့်ဖောက်သည်အကောင့်ကိုဖွင့်နိုင်သည် (https://marketplace-fidulink.com/connexion?create_account=1)
ကျွန်ုပ်၏ FiduLink အကြံပေးကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
ဆက်သွယ်ရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် Fidulink ၏လက်မှတ်ဖြင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖောက်သည်အကောင့်တစ်ခုရှိကြသည်။ ၎င်းမှာပြည်တွင်းသတင်းပို့ခြင်းကဲ့သို့သောအားသာချက်များကိုပေးသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။ Internal messaging သည်သင်၏အကြံပေးသူကိုကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်လုံးဝလုံခြုံမှုရှိသည် (HTTPS နှင့် SSL 256 BITS) ။ အကယ်၍ သင်အလိုရှိလျှင်သင်သည်သင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်ပါနာရီများ၌လည်းဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ တနင်္လာနေ့မှသောကြာအထိမနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ၁၂း၀၀ နာရီနှင့် ၂း၀၀ နာရီမှည ၇း၀၀ နာရီအထိ။
Fidulink ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လျှို့ဝှက်ထားပါသလား။
တကယ်တော့၊ သင်သည်သင်၏ Fidulink အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်အားလျှို့ဝှက်စာချုပ်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏စီမံချက်နှင့်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းရန်သင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကဤအရာကိုတည်ထောင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းအတွက်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာနိုင်သည့်ပြproblemsနာများနှင့်အခြားဖြေရှင်းချက်များ။ အမှန်မှာ၊ သင်၏ဖိုင်၏လျှို့ဝှက်ချက်သည် Fidulink အတွက် ဦး စားပေးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းလုပ်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဘဏ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီကိုမိတ်ဆက်ပေးရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။
အမှန်စင်စစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည်ဥရောပ၌သာမကကမ္ဘာတွင်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖန်တီးသောအခါ Fidulink သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဏ်အသစ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပြည်တွင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဘဏ်နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖောက်သည်အဖြစ်လက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ နိဒါန်းသည်ဘဏ်နှင့်ဘဏ္orာရေးဌာန၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအပေါ်မှီခိုရသည့်အကြောင်းအရင်းအတွက်သိပ္ပံပညာအတိအကျမဟုတ်ပါ ဒီနိဒါန်း၏။
ငါက Fidulink ကငါ့ကုမ္ပဏီနှင့်ငွေစာရင်းဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုတာငါအာမခံနိုင်သလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းကိုဟုတ်ကဲ့ဖြေရန်အလွန်လိုချင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အင်တာဗျူးတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ပြသော်လည်းမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဘဏ်နှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများအစားအပြုသဘောဆောင်သည့်အဖြေအတွက်တာ ၀ န်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်ဘဏ်မိတ်ဆက်၏မူဘောင်အတွင်းအချက်များများစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တရားဝင်ပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ အရင်းအနှီး၊ ကိုယ်စားလှယ် (များ)၊ ။ နိမ့်ဆုံးမတည်ငွေရင်းနှင့်သာမန်လုပ်ဆောင်မှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပြproblemနာတစ်ခုမဟုတ်သင့်ဟုကျွန်ုပ်တို့ရိုးရှင်းစွာပြောနိုင်သည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများတွင်ဘဏ်နှင့်ဘဏ္institutionsာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှအဆင်ပြေချောမွေ့သောရလဒ်ကိုရရှိစေရန်အတွက်အဖြေများစွာရှိသည်။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်အကူအညီနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် FiduLink သို့ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသည့်အနေဖြင့် Fidulink သည်လုပ်ဆောင်မှုများမရှိဘဲတာ ၀ န်ရှိသည်ဖြစ်စေမပါဘဲ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေ၊ မပါ ၀ င်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းတွင်သင့်အားကူညီသည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာ။ သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဗဟုသုတများစွာလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Fidulink အကြံပေးနှင့်လှေသို့မဟုတ်ရွက်လှေတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အမှန်မှာ၊ သင်၏ Fidulink အကြံပေး၏ရိုးရှင်းသောတောင်းဆိုချက်အရသင်သည် Fidulink ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်လှေသို့မဟုတ်ရွက်လှေတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သို့သော်ငြားလည်း၊ သင်၏ဖိုင်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည့်သင်၏အကြံပေးကိုလှေသို့မဟုတ်ရွက်လှေနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့မှသာသူသည်သင့်အားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်စိတ်ချနိုင်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ရွက်လှေသို့မဟုတ်လှေကိုမှတ်ပုံတင်လိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Fidulink အကြံပေးနှင့်ကား (သို့) ကားပါကင်မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
တကယ်တော့၊ သင်၏ Fidulink အကြံပေး၏ရိုးရှင်းသောတောင်းဆိုချက်အရသင်သည် Fidulink ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကားများသို့မဟုတ်ကားများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သင်ကားမှတ်ပုံတင်လိုသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်သင့်အားစိတ်ချစေရန်သင်ကသင်၏ကားဖိုင်သို့မဟုတ်ကားများနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သင်၏ဖိုင်ကိုတာဝန်ခံသည့်သင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကားများစင်း။
ကျွန်ုပ်၏ Fidulink အကြံပေးနှင့်ဂျက်လေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အမှန်မှာ၊ သင်၏ Fidulink အကြံပေး၏ရိုးရှင်းသောတောင်းဆိုမှုအရ Fetulink ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သို့သော်သင်မှတ်ပုံတင်လိုသောနေရာတွင်သင်ရွေးချယ်ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ပဏာမလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သင်၏ဖိုင်တာဝန်ခံကိုသင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အားသင်လိုအပ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်။
တကယ်တော့၊ သင်၏ Fidulink အကြံပေး၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်ဥရောပ၌သာမကကမ္ဘာတွင်ပါကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ဖိုင်အပြည့်အစုံကိုသင်၏ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မည်။
FIDULINK ၏အကြံပေးများသည်ဥပဒေပြုသူများ၊ ရှေ့နေများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီစာရင်းအင်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုပေးသောနိုင်ငံများရှိစာရင်းကိုင်များဖြစ်သည်။
အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီဖန်တီးမှုအထုပ်ပုံသေနည်းသည်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများအစုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးစင်တာများတွင်နေထိုင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းဘဏ်တစ်ခုတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောပုံသေနည်းကိုပေးထားသည်။
တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍ အချိန်အပိုင်းအခြားမှာကွဲပြားသော်လည်းပျမ်းမျှအားဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည် ၃ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိကြာသည်။ သင်၏ရုံးနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားသင်၏ FIDULINK အကြံပေးထံပေးပို့ပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကတရားဝင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံသားအားလုံး FIDULINK.com တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုအီးမေးလ်ဖြင့်အမြဲဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်၏အမှာစာကို Bitcoin BTC ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်သည်၊ FIDULINK သည် Bitcoin (BTC) မှငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပြီး၊
သင်၏အမှာစာပြီးသည်နှင့်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြရပါလိမ့်မည်။ Passport + လိပ်စာအထောက်အထား၊ လိုအပ်ပါကအကြံပေးနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီကို VAT အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန် FIDULINK ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ သင်၏ကုမ္ပဏီကို VAT အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဂရုပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုင်ဌာနသို့ဖုန်းဆက်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းလဲရန် FIDULINK ကိုခေါ်။ ရပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတာ ၀ န်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်ရာစာရင်းအင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်၏ MY OFFICE နေရာတွင်သင်၏စာရင်းကိုင်မန်နေဂျာနှင့်သာဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်၏ MARKETPLACE သုံးစွဲသူareaရိယာရှိသင့်အမှာစာအတည်ပြုမှုမှရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
စာပို့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းချက်များတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရွေးချယ်သောလိပ်စာသို့သင်စာပို့မည်မှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ virtual office ဖြင့်ဒေသခံဖုန်းနံပါတ်ကိုရနိုင်မလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအားသင်၏လွတ်လပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အဆင့်မြင့် virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏အမှာစာကို Fidulink (Credit Card) ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ကုမ္ပဏီအားသင်၏ကဒ်ပြားကိုဘဏ်ကတ်ဖြင့် (ငွေထုတ်သို့မဟုတ်အကြွေးဖြင့်) အပြည့်အ ၀ လုံခြုံစိတ်ချစွာပေးဆောင်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပုံစံကို www.marketplace-fidulink.com မှရယူနိုင်သည်။ သင်သည်အွန်လိုင်းဖန်တီးမှုအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ WhatsApp (သို့) ဖုန်းဖြင့်အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့ရှိသည်။
သင်၏ account login fromရိယာ (https://marketplace-fidulink.com/recuperation-mot-de-passe) မှစကားဝှက်အသစ်တစ်ခုတောင်းခံနိုင်သည်။
သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်၏သုံးစွဲသူinရိယာရှိ pdt ပုံစံဖြင့်အချိန်မရွေးရရှိနိုင်သည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် (https://marketplace-fidulink.com/histoire-commandes)
သင်သည်စာပို့ခြင်းခရက်ဒစ်ကိုသင်၏ဖောက်သည်အကောင့် (MY WALLET) အောက်တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
သင်လိပ်စာတစ်ခု (https://marketplace-fidulink.com/adresses) ကို configure လုပ်နိုင် - လိပ်စာအသစ်ဖန်တီးပါ။ Alias ​​(FORWARD MAIL)
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်၏ဖောက်သည်အကောင့် (https://marketplace-fidulink.com/avoirs) တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်ထံအပ်နှံထားသော Fidulink အေးဂျင့်သို့အီးမေးလ်တစ်စောင်မည်သို့ပို့ရမည်နည်း။
သင်သည်သင်၏အပ်နှံထားသော Fidulink ကိုယ်စားလှယ်ကိုသင်၏ဖောက်သည်fromရိယာမှသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ contact représentation @ Danemarkfidulink.com
လိပ်စာအထောက်အထား (၃ လမပြည့်မီ) (ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်၊ ဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်၊ တယ်လီဖုန်း)
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်ဤအဆင့်သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ မြို့တော်ခန်းမ၊ ရဲစခန်း၊ သံရုံး၊ ပြည်သူ့ရှေ့နေ၊ ပြည်သူ့ရှေ့နေ၊ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်နှင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ဖောက်သည်သည်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်လိုင်စင်ကိုယ်စားကိုယ်စားဘဏ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဖောက်သည်က Fidulink အေးဂျင့်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များအားပေးသောစာပါဝါဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအားလုံးကိုအဓိကအကြံပေးဥပဒေရေးရာအကူအညီများပေးပြီးတောင်းခံလျှင်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်စားပြုရန်ဒေသခံ FiduLink ရှေ့နေနှင့်သင်ပေးနိုင်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်fromရိယာမှစာရင်းကိုင်ဌာနသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် (ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုရွေးချယ်မှု) FILE NUMBER (သင်၏ကုမ္ပဏီ) သင်၏အပိုင်း (သို့) သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုဤthroughရိယာမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်မီ ၂ လအလိုတွင်သင်၏ဖောက်သည်နေရာတွင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဒါရိုက်တာ & ပါတနာ + ၂၅% ပါ ၀ င်မှု
လိပ်စာအထောက်အထား (- ၃ လ)
Remote Bank Account တစ်ခုဖွင့်ရန်အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
စာတိုက်နှောင့်နှေးမှုနှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လဲလှယ်ချိန်များရှိသည့်ဘဏ်နှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် မူတည်၍ အချိန်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းသည်ပျမ်းမျှ ၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်းကြာသည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာသို့ရောင်းလိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိပါသည်။ ဤတောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင့်များဖြစ်သောဘဏ်နှင့်ဘဏ္solutionာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ ယူအက်စ် USDP GBP AUD NZD SGD …
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုရနိုင်မလား။
အဖြေမှာဟုတ်သည်၊ Fidulink သည်အင်တာနက်ကုန်သည်များအတွက်အဖြေများပေးသောဘဏ္partnersာရေးမိတ်ဖက်များစွာ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုသင်၏ Fidulink ကိုယ်စားလှယ်ထံမှတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီအတွက် Bitcoin online payment solution ကိုရနိုင်ပါသလား။
အဖြေမှာဟုတ်သည်၊ Fidulink တွင်အပြည့်အဝ Bitcoin စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ၎င်းကိုသင်၏ Fidulink ကိုယ်စားလှယ်ထံမှတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ KYC ပchartိညာဉ်စာတမ်း၏မူဘောင်အတွင်းတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မှာဖောက်သည်သည် Fidulink ကွန်ယက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး စီ၏လိပ်စာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသလား။
အဖြေကဟုတ်တယ်။ Fidulink သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးရေးကဏ္ in တွင်ကျွမ်းကျင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရှိသည်။ ၎င်းကိုသင်၏ Fidulink ကိုယ်စားလှယ်ထံမှတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်မှုအတွက် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါသလား။
သင်၏ဒေသခံရှေ့နေများသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အလုပ်များ၊ ကန်ထရိုက်များ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစသည်တို့ကိုသင့်အတွက်ပေးပို့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကိုရောင်းရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
The Answer and Yes Fidulink နှင့်၎င်း၏ဒေသခံရှေ့နေများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရောင်းဝယ်မှုအတွက်မည်သည့်အကူအညီကိုမဆိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသလား။
အဖြေကဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များသည်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံ၌သင်၏ရုံးခွဲကိုဖန်တီးနိုင်သည်
ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Fidulink ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသလား။
အဖြေကဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များသည်သင်၏ကုမ္ပဏီဌာနခွဲကို Fidulink.com ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ ခုအနက်မှတစ်ခုတွင်ဖွဲ့စည်းရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်